Iwu Nzuzo | Radị Rave
A chịkọtara iwu nzuzo a iji jeere ndị ọrụ ozi nwere ike ije ozi ndị nwere nchegbu etu esi eji ‘ozi njirimara onwe onye’ (PII) na-eji ntanetị. PII, dika eji ya na iwu nzuzo na US na nchedo ozi, bu ozi enwere ike iji ya onwe ya ma obu ihe omuma ndi ozo iji mata, kpoo, ma obu ichota otu mmadu, ma obu iji choputa onye ozo. Biko gụọ iwu nzuzo anyị nke ọma iji nweta nghọta doro anya banyere otu anyị si anakọta, ojiji, chebe ma ọ bụ ijikwa PII gị dịka weebụsaịtị anyị.
Mgbe ị na-agwa ma ọ bụ na-edebanye aha na saịtị anyị, dịka o kwesiri, enwere ike ịgwa gị ka itinye aha gị, adreesị ozi-e ma ọ bụ nkọwa ndị ọzọ iji nyere gị aka na ahụmịhe gị.
Anyị na-anata gị ozi mgbe ịdenye aha akwụkwọ akụkọ ma ọ bụ tinye ozi na saịtị anyị.
• iji hazie ahụmịhe nke onye ọrụ na ịhapụ anyị ka anyị nyefee ụdị ọdịnaya na onyinye ngwaahịa nke ihe masịrị gị.
• Ka izipu ozi ịntanetị kwa oge gbasara usoro gị ma ọ bụ ngwaahịa na ọrụ ndị ọzọ.
Kedụ ka anyị si chekwaa ozi ndị bịara ileta anyị?
A na-enyocha weebụsaịtị anyị mgbe niile maka oghere nche na amaghị nke ọma iji mee ka nleta anyị gaa na saịtị anyị dịka o kwere mee.
Anyị anaghị eji akwụkwọ SSL
• Anyị na-enye akụkọ na ozi naanị, anyị anaghị ajụ maka ozi nkeonwe ma ọ bụ nkeonwe dị ka adreesị email, ma ọ bụ nọmba kaadị akwụmụgwọ.
Ee. Kuki bụ obere faịlụ na saịtị ma ọ bụ ndị na-ahụ maka ọrụ na-enyefe na draịvụ ike kọmputa gị site na ntanetị weebụ gị (ọ bụrụ na ikwe ka) nke na-enyere usoro saịtị ahụ ma ọ bụ onye na-ahụ maka ọrụ aka ịmata ihe nchọgharị gị ma jide ma cheta ụfọdụ ozi. Dịka ọmụmaatụ, anyị na-eji kuki enyere anyị aka icheta ma dezie ihe ndị dị na ụlọ ahịa gị. A na-ejikwa ha iji nyere anyị aka ịghọta ihe ịchọrọ mmasị dabere na ọrụ saịtị ma ọ bụ nke ugbu a, nke na-enyere anyị aka inye gị ọrụ dị mma. Anyị na-ejikwa kuki enyere anyị aka ikpokọta data gbasara okporo ụzọ saịtị na ebe nrụọrụ weebụ ka anyị wee nwee ike inye ezigbo ahụmịhe na ngwaọrụ n'ọdịnihu.
• kpokọta data gbasara traktị saịtị yana njikọ saịtị dị iche iche iji nye ahụmịhe na ngwaọrụ dị mma n'ọdịnihu. Anyị nwekwara ike iji ọrụ ndị ọzọ tụkwasịrị obi na-achọ ozi a na nnọchite anyị.
Can nwere ike ịhọrọ ka kọmputa gị dọọ gị aka na ntị oge ọ bụla ezigara kuki, ma ọ bụ ị nwere ike họrọ gbanyụọ kuki niile. Na-eme nke a site na mwube ihe nchọgharị gị (dịka Internet Explorer). Ihe nchọgharị ọ bụla dịtụ iche, yabụ lee menu ihe enyemaka nke nchọgharị gị iji mụta ụzọ ziri ezi iji gbanwee kuki gị.
Ọ bụrụ na ị gbanyụọ kuki, ụfọdụ atụmatụ ga-nkwarụ Ọ gaghị emetụta ahụmịhe ndị ọrụ ahụ na-eme ka ahụmịhe saịtị gị rụọ ọrụ nke ọma na ụfọdụ ọrụ anyị agaghị arụ ọrụ nke ọma.
Agbanyeghị, ị ka nwere ike itinye iwu.
Ngosipụta nke Atọ
Anyị anaghị ere, ahia ma ọ bụ bufee na ndị ọzọ na mpụga ozi gị na-akọwa omume gị.
Mgbe ụfọdụ, na nghọta anyị, anyị nwere ike ịgụnye ma ọ bụ nye ndị ọzọ ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ na weebụsaịtị anyị. Ụlọ ọrụ ndị a ndị ọzọ nwere atumatu nzuzo nzuzo na nke onwe. Ya mere, anyị enweghị ọrụ ma ọ bụ ọrụ maka ọdịnaya na ọrụ nke saịtị ndị a jikọtara. Ka o sina dị, anyị na-achọ ichedo iguzosi ike n'ezi ihe nke saịtị anyị ma nabata nzaghachi ọ bụla banyere saịtị ndị a.
Google, dị ka onye na-ere ahịa nke atọ, na-eji kuki iji na-enye mgbasa ozi na saịtị anyị. Ojiji nke Google kuki DART na-eme ka o nwee ike ibute mgbasa ozi nye ndị ọrụ dabere na nleta ha na saịtị anyị na saịtị ndị ọzọ na Internetntanetị. Ndị ọrụ nwere ike pụọ na ojiji kuki DART site na ịga na mgbasa ozi Google na iwu nzuzo nke netwọkụ ọdịnaya.
• Nyochaa Google AdSense
Anyị na ndị na-ere ahịa ndị ọzọ, dị ka Google jiri kuki ndị ọzọ (dịka kuki Google Analytics) na kuki ndị ọzọ (dịka cookie DoubleClick) ma ọ bụ ndị ọzọ na-akọwapụta ndị ọzọ iji chịkọta data gbasara mmekọrịta onye ọrụ na ihe ngosi, na ọrụ ọrụ mgbasa ozi ndị ọzọ ka ha na-akọ na weebụsaịtị anyị.
Ndị ọrụ nwere ike ịtọ mmasị maka otu Google si akpọsa gị na iji Google Ad Settings peeji nke. N'aka nke ọzọ, ịnwere ike ịpụpụ site na ịga na Mgbasa Ozi Mgbasa ozi ịpụ na peeji nke ma ọ bụ na-eji Google Analytics Out Out Browser tinye na.
Ụkpụrụ Nchedo Nzuzo California Online
CalOPPA bụ iwu steeti izizi na mba ahụ chọrọ saịtị weebụ azụmahịa na ọrụ ntanetị iji zipu iwu nzuzo. Iwu iru ruru gafee California ịchọ mmadụ ma ọ bụ ụlọ ọrụ dị na United States (yana ụwa niile) na-arụ ọrụ weebụsaịtị na-anakọta ozi nzuzo nke ndị ahịa California ka ha biputere iwu nzuzo nzuzo na weebụsaịtị ya na-ekwupụta ozi ziri ezi. ndị ya na ha na-emekọrịta ihe, ma soro iwu a. - Lee ndi ozo na: http://consumercal.org/california-online-privacy-protection-act-caloppa/#sthash.0FdRbT51.dpuf
Dabere na CalOPPA anyị kwenyere na ndị a:
Ndị ọrụ nwere ike ịga na saịtị anyị na-amaghị
Ozugbo emepụtara iwu nzuzo a, anyị ga-agbakwunye njikọ na ya na peeji nke ụlọ anyị, ma ọ bụ dịka nke kacha nta na peeji mbụ dị mkpa mgbe ịbanye na weebụsaịtị anyị.
Njikọ Iwu Nzuzo Anyị gụnyere okwu 'Nzuzo', enwere ike ịchọta ya na peeji ahụ akọwapụtara n'elu.
A ga-agwa ndị ọrụ banyere mgbanwe iwu nzuzo ọ bụla:
• Na Nzuzo Nzuzo Anyị
• Site na ozi ịntanetị anyị
Kedu otu esi ejide saịtị anyị anaghị akara akara?
Anyị asọpụrụ anaghị esochi akara ma ọ dịghị esochi, kuki kuki, ma ọ bụ jiri mgbasa ozi mgbe usoro ihe nchọgharị Dochie (DNT) adịghị.
Saịtị anyị na-enye ohere ịchụso omume nke atọ?
Ọ dịkwa mkpa ịmara na anyị na-enye ohere ịlele omume nke atọ
A bịa na mkpokọta ozi nkeonwe sitere n'aka ụmụaka na-erubeghị afọ 13, Protectionkpụrụ Nchebe Nzuzo Onlinemụaka n'ịntanetị (COPPA) na-etinye ndị nne na nna. Federal Trade Commission, mba na-ahụ maka nchebe ndị ahịa, na-eme ihe Iwu COPPA, nke na-akọpụta ihe ndị na-ahụ maka weebụsaịtị na ọrụ ntanetị ga-eme iji chebe nzuzo ụmụaka na nchekwa ha n'ịntanetị.
Anyị anaghị ere ahịa ụmụaka kpọmkwem n'okpuru 13.
Ezigbo Ozi Ihe
Ụkpụrụ Omuma Iwu Ịghọta Ozi na-etolite ọkpụkpụ nke iwu nzuzo na United States na echiche ndị ha gụnyere gụnyere oke ọrụ na mmepe iwu iwu nchebe gburugburu ụwa. Ịghọta Ụkpụrụ Omuma Iwu Omume na otú e si eme ha ka ọ dị mkpa dị mkpa iji rube iwu dị iche iche nzuzo nke na-echebe ozi nkeonwe.
Iji mee ka anyị kwekọọ na Usoro Ihe Omume ọma, anyị ga-eme ihe omume na-esonụ, ọ bụrụ na data data emee:
Anyị ga-eme ka ndị ọrụ mara ozi site na ozi-e
• N'ime ụbọchị azụmahịa 7
Anyị ga-agwa ndị ọrụ site na ngosi ọkwa
Anyi na ekwenyero na usoro mmezi nke mmadu, nke choro ka ndi mmadu nwee ikike ịchụso ndi kwesiri iribiga oke na ndi nchikota data na ndi n’etinyeghi iwu. Kpụrụ a chọrọ ọ bụghị naanị na ndị mmadụ n'otu n'otu nwere ịkwụ ụgwọ ikike megide ndị ọrụ data, kamakwa na ndị mmadụ nwere nkwuchitere n'ụlọ ikpe ma ọ bụ ụlọ ọrụ gọọmentị iji nyochaa ma / ma ọ bụ kpee mkpesa na nrube isi site na ndị nyocha data.
Ka anyị wee kwekọọ na CANSPAM anyị kwenyere n'ihe ndị a:
anyị ga-ewepu gị ozugbo na akwụkwọ ozi niile.
Ọ bụrụ na e nwere ajụjụ ọ bụla banyere nke a na iwu nzuzo ị nwere ike ịkpọtụrụ anyị na-eji ozi n'okpuru.
Nchịkọta Ikpeazụ na 2017-12-05